Posted by တန်ခူး at 9:18 PM5comments:
Posted by တန်ခူး at 12:22 AM3comments:
Posted by တန်ခူး at 9:30 PM2comments:
Posted by တန်ခူး at 3:25 PM7comments:
Posted by တန်ခူး at 4:20 PM2comments:
ကျွန်မက ဆေးပညာအကြောင်းဆို ဘာမှ သိပ်နားမလည်သလို သိပ်လဲ လေ့လာလိုက်စားသူ မဟုတ်ပါ…။ ကိုယ့်မှာ တခုခုဖြစ်လာမှ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တယောက် တခုခုဖြစ်လာမှ ဟိုဆရာဝန်ပြေးမေး… ဒီဆရာဝန်ပြေးမေး… အင်တာနက်ပေါ် သွားဖတ်နဲ့ တယောက်ထဲ အပူလုံးတွေနဲ့အလုပ်ရှုပ်တတ်သူပါ…။ ဗဟုသုတကလဲနဲ ကျန်းမာရေးစာတွေ လေ့လာမှုကလဲနဲ ဆိုတော့ အထင်တွေနဲ့ လုပ် အထင်တွေနဲ့ ပူပေါ့…။ နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်မှပြူးပြူးပြဲပြဲ ထကုတာထက် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ကာကွယ်တာက ပိုကောင်းတာ လေ့လာရင်း လေ့လာရင်းနဲ့ ပိုသိလာပါတယ်…။ အထူးသဖြင့် နေ့ စဉ်အနေအထိုင် အစားအသောက်ကို ပြုပြင်ဖို့ က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ပိုပိုသိလာပါတယ်…။ အမှန်ပြောရရင် သားလေးမွေးပြီးမှ သားကို ကျန်းမာစေချင်တဲ့ မိခင်တယောက်ရဲ့ အတ္တနဲ့အစားအသောက် အနေအထိုင် စံနစ်တွေ ပိုပြောင်းမိပါတယ်…။
လေ့လာလိုက်စားမှုနဲ ပေမယ့် အပေါ်မှာပြောသလို တကယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ ကျွန်မပဲ အသေးစိတ်ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလေ့လာချင်တတ်ပြန်ရော…။ အဲဒီအခါ ကျွန်မမှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ ရပါတယ်…။ ဖြစ်မှသိချင်လာတော့ အချိန်နဲနဲအတွင်း ဟိုဟာဖတ် ဒီဟာဖတ်နဲ့တခါတလေ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ information မရပဲ ဟိုတမျိုး ဒီတမျိုးနဲ့ရှုပ်ကုန်ပါတော့တယ်…။ အရေးအကြောင်းဆိုရင်တော့ ကျွန်မညီမအရင်းက ဆရာဝန်မို့သူ့ ပဲ အမြဲတိုင်ပင်ရပါတယ်…။ ဒါပေမယ့် အင်ဂျင်နီယာပီပီ ပြဿနာတခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ အသေးစိတ်သိချင်နေတဲ့ ကျွန်မမေးခွန်းတွေကို ကျွန်မညီမက အစိုးရိမ်လွန်မှုလို့အမြဲအမည်တပ်ပါတယ်…။ အဲဒီအခါ ကျွန်မလိုချင်တဲ့ အဖြေဆီ မရောက်တတ်ပါဘူး…။ ကျွန်မကလဲ ဒါဖြစ် ဒီဆေးသောက်ဆိုတာနဲ့ တင် ကျေနပ်တတ်တဲ့သူ မဟုတ်လေတော့ မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လို့သားနေမကောင်းများဖြစ်ရင် သားရဲ့ နေမကောင်းဖြစ်စဉ်ကို အသေးစိတ်ပြောချင် မေးခွန်းတွေက မေးချင်နဲ့ … နောက်ဆုံး ဆရာဝန်ရဲ့ မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့သွယ်ဝိုက်သောနည်းအားဖြင့် ပါးစပ်ပိတ်ထားဖို့ပြောတာကို ခံရပါတယ်…။ ကျွန်မအတွေ့ အကြူံနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။ ဆရာဝန်တိုင်းကို မဆိုလိုပါ…။ မြန်မာပြည်မှာ လူနာတွေရဲ့ right က အတော်နဲပါးနေတာ သတိထားမိလာပါတယ်…။ ပြောသလိုသောက်ဆိုတာမျိုး... ဆေးခန်းပြရင် ဆေးလေးယူ ပါးစပ်လေးပိတ်ပြီး ပြန်လာရှာရပါတယ်…။ ကြာလာတော့ အဲဒီအခြေအနေတခုနဲ့နေသားကျပြီး မေးခွန်းမေးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိတောင် မရှိကြတော့ပါဘူး….။ ဘယ်လောက်များ သနားစရာကောင်းလိုက်သလဲနော်…။
တနေ့ တခြား ရောဂါတွေများလာ… ကင်ဆာဖြစ်မှုကလဲ ကမ္ဘာမှာ အများဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါ တိုင်းသူပြည်သားတွေကို ကျန်းမာရေး အသိပေးမယ့် ဆရာဝန်တွေအများကြီး ပေါ်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့တောင့်တမိပါတယ်…။ ကျွန်မမိဘအရင်းတွေတောင်မှ ကျွန်မက နေ့ စဉ်နေထိုင်စားသောက်တာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီအောင် နေထိုင်စားသောက်ဖို့အကြံပေးပေမယ့် သိပ်လက်မခံကြပါဘူး…။ စီးပွားရေးအရ တွက်ခြေကိုက်အောင် ချက်ပြုတ်ရောင်းချနေတဲ့ အပြင်စာတွေကို မက်မက်စက်စက် စားနေကြတုန်းပါ…။ အဲဒီအခါ ကျွန်မမှာ အားမလို အားမရနဲ့အမြဲလက်လျော့ အရှုံးပေးရမြဲပါ…။ လူတွေရဲ့ နားထဲကို ၀င်အောင် လိုက်လာလက်ခံနီုင်အောင် ပြောပြနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးပညာပေးကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေများရှိရင် Media တွေများရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့တောင့်တမိပါတယ်…။ ဒါမစားနဲ့ဒါနဲ့ မတည့်ဘူးလို့အခြေအမြစ်မရှိပြောတာထက် အကျိုးနဲ့ အကြောင်းနဲ့သေချာလေ့လာလိုက်စားပြီး ပြောတာကိုမှ လူတွေနားထဲ ပိုရောက်နိုင်ပါတယ်…။
ဟိုတနေ့ က ညီမအရင်းလို ချစ်တဲ့ ညီမလေးက ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်းရဲ့ you tube file လေးကို မျှဝေလို့ နားထောင်မိတဲ့အခါ ကျွန်မမျှော်လင့်ချက်တွေ အတော်ကို ပြည့်ဝသွားပါတယ်…။ မြန်မာပြည်က ကျန်းမာရေးဗဟုသုတနဲတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိလွန်းပါတယ်…။ ဆရာမကြီး ဟောပြောတာကို နားထောင်ပြီးမှ ကျွန်မရဲ့ နေ့ စဉ်စားသောက်မှု တချို့ က အတော်မှားယွင်းနေတာ သိသွားရပါတယ်…။ Non-stick အိုးကို ဒယ်အိုးပူမှ ဆီထည့်ခြင်းဟာ ကိုယ့်ရောဂါကို ဖန်တီးနေတာဖြစ်ကြောင်း သိရတဲ့ အခါ ကျွန်မအတော်လေး လန့် သွားပါတယ်…။ တခါတလေ Happy Call နဲ့သားကို ငါးတွေ ဘာတွေ ကင်လိုက်သေးတာ…။ မွှေလို့ နောက်လို့ကျော်လို့ လှော်လို့ ကောင်းလို့ကျွန်မ နေ့ တဓူဝသုံးနေတဲ့ ဒန်ဒယ်အိုးလေးက ကျွန်မကို အဆိပ်အတောက်တွေ ပေးနေတာ ကျွန်မမသိခဲ့ဘူးလေ…။ Canola oil တော့ သုံးပါရဲ့… အချိုမှုန့် လဲရှောင်ပါရဲ့… cooking ware တွေလဲ ဂရုတစိုက်သုံးပါရဲ့… ဒါပေမယ့် အိမ်ရှင်မ တယောက်အနေနဲ့ကျွန်မမီးဖိုးချောင်မှာ အဆိပ်အတောက်ကင်းအောင် ကျွန်မလုပ်ရမှာတွေ အများကြီးလိုနေသေးတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်…။ တမိသားစုလုံးရဲ့ ကျန်းမာရေးဟာ အိမ်ရှင်မရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဆရာမကြီးက မီးမှောင်းထိုးပြသွားပါတယ်…။
ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် ဘာတွေရှောင်ရမလဲ…သဘာဝတရားနဲ့ဘယ်လို ကာကွယ်မလဲ… နေ့ စဉ်နေထိုင်စားသောက်ပုံ ဘယ်လိုပြောင်းမလဲ… ကျန်းမာဖို့ခုခံအားက ဘယ်လောက် အရေးကြီးလဲ… ဘယ်လိုဓါတ်တွေကို ဖြည့်ဆီးပေးဖို့ လိုလဲ… အဲဒါတွေကို လူတန်းစားပေါင်းစုံ နားလည်နိုင်အောင် medical term တွေ အများကြီးနဲ့မဟုတ်ပဲ ရိုးရိုးလေးရှင်းပြထားပါတယ်…။ ရောဂါတခုဖြစ်လာရင် အကျိုးကို သာ သတ်ပြီး အကြောင်းကို သတ်ဖို့မေ့ နေကြလို့မခံသင့်ပဲ ရောဂါဒဏ်ခံကြရတာကိုလဲ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထောက်ပြသွားတာ ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားခဲ့တာနဲ့တထပ်ထဲပါပဲ….။ ကျွန်မတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်တဲ့ နနွင်းနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာ ပိုက်ဆံတွေ အဆမတန် ဈေးကြီးပေးနေရတဲ့ ဆေးတွေထက် အစွမ်းထက်နေတာ အံ့သြစွာ သိလိုက်ရတယ်…။ အချိန်ရရင် သွားကြည့်စေချင်ပါတယ်…။ နားထောင်ကျင့်သုံးရတာ လွယ်ကူတာမို့ကျွန်မဆို နားထောင်ပြီးတာနဲ့စလုပ်နေပါပြီ…။ နေ့ စဉ် နနွင်း လဘက်ရည်ဇွန်းနဲ့၃ပုံတပုံလောက် သံလွင်ဆီလေးနဲ့ဖျော်သောက်တာရယ်… ကိုက်လန်၊ မြင်းခွာ၊ ပန်းပွင့်၊ ဂေါ်ဖီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥနီ၊ တရုတ်နံနံ၊ သဘောင်္ရွက်၊ ရဲရိုရွက်၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တွေ ရောထားတဲ့ အရွယ်ရည်ကို နေ့ စဉ်သောက်သုံးခြင်းအားဖြင့် ရောဂါကြီးတော်တော်များများကိုတောင် ကာကွယ်ခုခံနိုင်တာတွေရယ်ဟာ… ကျွန်မတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေ ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ ကျန်းမာစေမယ့် ဆေးကောင်းတွေပါ…။ ရိုးရှင်းတဲ့ အဲဒီနည်းတွေကို တနိုင်ငံလုံးများ လိုက်နာကျင့်သုံးလိုက်ရင်ဖြင့်… လေဘာတီမမြရင် ရဲ့ တုံးကျော်မသီချင်းထဲကလို သေနိုင်ပါရိုးလား…မြန်မာပြည်သူတွေရယ်… လို့ သာ လက်ခမောင်းခတ်လို့ ရမှာ အမှန်ပါပဲ…။
ချစ်သော မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ နှစ်သစ်မှာ သက်ရှည်ကျန်းမာ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ…
Posted by တန်ခူး at 10:41 PM 10 comments:
(ဓာတ်ပုံလေးက သားနဲ့ သူ့ မြန်မာသူငယ်ချင်းလေးတွေ ဒီနိုင်ငံက culture event မှာ မြန်မာသင်္ကြန်ကို သရုပ်ဖော်ကပြတုန်းက အမှတ်တရရိုက်ထားတာလေးပါ... အဲဒီအကြောင်းပို့ စ်တခု သတ်သတ်ရေးပါ့မယ်)
အသက်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီး သင်္ကြန်နားရောက်တိုင်း သင်္ကြန်ပိုးတွေက ဘယ်ကနေဘယ်လို ရောက်လာသလဲမသိ…။ အလုပ်လုပ်တာတောင် သင်္ကြန်သီချင်းလေးနားထောင်… အားရက်တွေ မုန့် လုပ်စားဖို့ စဉ်းစားရင်တောင် မုန့် လုံးရေပေါ်လေးပဲ လုပ်ချင်… အိမ်မှာလဲ သင်္ကြန်သီချင်းတွေ အကျယ်ကြီးဖွင့်… သိပ်မထိန်းနိုင်ရင် အခန်းတံခါးပိတ် တယောက်ထဲက… on line ပေါ်က သင်္ကြန်နောက်ခံ ရုပ်ရှင်ကားလေးတွေ ရှာဖွေကြည့်… ဒီနိုင်ငံမယ် ဘယ်နေရာ သင်္ကြန်ပွဲဆင်ရှိမလဲနားစွင့်ပြီး သွားဖို့ ပြင်ဆင်နဲ့ … အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတတ်တာ အဲဒီပိုးကြောင့်ထင်ပါရဲ့….။ ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်နှစ်ကူးနဲ့ ဝေးခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေများ လက်ဆယ်ချောင်းပြည့်ခဲ့ပါပြီကော...။
ကိုယ့်တိုင်းကိုယ့်ပြည်မှာ သင်္ကြန်အတွက် ဘာတွေများ ပြင်ဆင်နေလဲဆိုတာ သတင်းတွေ ဖတ် ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရတာလဲ အမောပါ…။ မမျှော်လင့်ပဲ သတင်းတခု ဖတ်မိတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ အရမ်းဝမ်းနည်းသွားမိတယ်…။ သင်္ကြန်ဆိုတာ လူငယ်တွေ လွတ်လပ်စွာ ပျော်ကြတဲ့ပွဲလို့နားလည်ပေးနိုင်ပေမယ့် အဲဒီသတင်းကြီးကတော့ တဆိတ်ဆိုးဝါး လွန်းလို့ ပါ…။ သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေမှာ နားနေခန်းတွေ ထည့်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပေါ့...။ နားနေခန်းဆိုတဲ့ နောက်က နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေကို တွေးရင်း ရင်ပူမိတယ်...။ အထူးသဖြင့် ခေတ်ရဲ့ သမီးပျိုလေးတွေ အတွက်ပါ...။ ပွင့်လင်းရဲတင်းလွန်းလာတဲ့ မနှစ်ကသင်္ကြန်ပုံရိပ်တွေကြောင့် ရင်ထဲမှာ ရှိနေဆဲဝမ်းနည်းမှုတွေက အရှိန်မသေသေးခင် သူ့ ထက်ဆိုးတာတွေ ထပ်မြင်ရကြားရတာ အတော်ကို စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်...။
သင်္ကြန်ရဲ့ အနှစ်သာရ ပျောက်အောင်လောက်တောင် မလွန်သင့်ဘူးလားလို့ လေ...။ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေက သင်္ကြန်ခုတုံးလုပ်ပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားတွေ ပျက်ပြားဖို့အခွင့်အလန်းတွေ ရှာနေကြသလားလို့ ... ။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကလဲ သင်္ကြန်တွင်း ရေပက်ခံခဲ့ဖူးတယ်... သင်္ကြန်တွင်းရေပက်ဖူးတယ်... သင်္ကြန်အက ကခဲ့ဖူးတယ်... သံချပ်တွေ မိုးလင်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်... လူငယ်ပီပီ သင်္ကြန်အနှစ်သာရမပျက်အောင် ပျော်ခဲ့ဖူးပါတယ်...။ ခေတ်နဲ့အညီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ရွင်လို့ ရတဲ့ နည်းတွေ ပျော်စရာတွေ အများကြီး ရှိပါလျက်နဲ့ဘာလို့ များ ဖြူစင်လွန်းတဲ့ သင်္ကြန်ကို အရောင်တွေ ဆိုးချင်ကြတာလဲ...။ ဟိုးအရင်က သင်္ကြန်တွေမှာ မလုံမခြုံအ၀တ်တွေ မပါဘူး... စိတ်ကြွဆေးတွေမပါဘူး... ရိုင်းစိုင်းတဲ့ အနောက်တိုင်းအကတွေ မပါဘူး... အဲဒါတွေ မပါပဲ ပျော်စရာကောင်းခဲ့ကြတယ်...။
အဲဒီခံစားချက်တွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုကြောင့် ကျွန်မအရမ်းနှစ်သက်မိတဲ့ မြူမှောင်ဝေကင်းဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနားထောင်ပြီး သီချင်းခံစားမှုလေး ရေးဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်...။ တကယ်လို့သင်္ကြန်ဆိုတာ မိုက်ခဲဖို့ သက်သက်လို့ထင်နေကြတဲ့ လူငယ်လေးတွေများ ဖတ်မိရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သင်္ကြန်အလှနဲ့အနှစ်သာရကို ပိုနားလည်ပျော်ရွင်နိုင်ကြဖို့ရည်ရွယ်တာပါ...။
မြူမှောင်ဝေကင်းတဲ့…။ သီချင်းလေး နာမည်မှာကိုက အဓိပ္ပါယ်တွေ ပြည့်ဝနေတာပါ...။ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ နိင်ငံကျော် သင်္ကြန်မိုးဇာတ်ကား အဖွင့်သီချင်းလေးမို့လူတော်တော်များများနဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်မှာပါ…။
မြူမှောင်ဝေကင်း ငွေအဆင်းဆန္ဒ… ပြည်ထောင်.. တိုင်းမြန်ပြည်
တို့ တိုင်းပြည်ကြီး အမှောင်ကင်း ငွေရောင်အဆင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေ ငြိမ်းချမ်းအေးမြစေဖို့ဆုတောင်းဖို့အတာရေလောင်းကြတာပါ…။ စိုဖို့ရွှဲဖို့ရွဲဖို့ကဲဖို့ သက်သက် မဟုတ်ပါနော်…။
အဆင်ပြေ မြင်ရသူ ကြည်နူးလောက်ပေ...
မန်းမြို့ သူရဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ညီပေ...
အေးချမ်းပါစေ ရည်ရွယ်ပြီး သင်္ကြန်ရေလောင်းသူလေးတွေကို လုံမေလို့တင်စားထားတယ်…။ လုံလုံခြုံခြုံ ၀တ်စားဆင်ရင်ပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ ပျိုမေလေးတွေပေါ့…။ သင်္ကြန်လည်ဖို့ရေပက်ဖို့အလှဆုံးဖက်ရှင်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားကြတဲ့အခါ ခေတ်မှီမှီနဲ့လှအောင် စဉ်းစားလို့ ရပါတယ်…။ အသားတွေ အများကြီးပေါ်မှ လှတာမဟုတ်ပါဘူး… အသားတွေ အများကြီးပေါ်မှ လူအများကြီး စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်ပါဘူး… တကယ်လို့စိတ်ဝင်စားခဲ့ရင်တောင် ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားမယ့် သူက ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်မလဲ… တွေးကြည့်ရင် အတော်ရှက်စရာပါ…။ မြင်ရသူစိတ်ကို နှိုးဆွစေဖို့ ထက် ကြည်နူးစေခြင်းက ပိုမကောင်းဘူးလား…။ သူများအတိုဝတ်လို့ကိုယ်မ၀တ်ရင် ခေတ်မမှီဘူး ထင်မှာစိုးတဲ့ သူတွေများ ရှိရင်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…။ အတိုတွေကြားတဲ့ မြန်မာလို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးလေး ၀တ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါလို့ …။ ဘယ်လောက်များ ထူးထူးကဲကဲ လှနေမလဲဆိုတာ…။ မန်းမြို့ သူရဲ့ ဂုဏ်နဲ့ ညီပေ… ယဉ်ကျေးသူလေးတွေတဲ့…။ ပိုက်ဆံချမ်းသာတာ… ခေတ်ပေါ်အသုံးအဆောင်တွေ ၀တ်နိုင်တာ... ကို ဂုဏ်လို့ များ သတ်မှတ်ခဲ့သူတွေကို ပြောပြချင်လိုက်တာ…။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ ခြင်းဆိုတာ မိန်းခလေးတွေအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်တခုပါလို့ …။
အသိစိတ်ဓါတ်တွေနဲ့ကင်းကွာ မူးမိုက်ရီဝေပြီး ပျော်ကြတဲ့အပျော်က တဒင်္ဂပါ…။ ဒီကြားထဲမှာ အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်တဲ့ အမှားတွေဆီ ရောက်သွားဖို့အရမ်းလွယ်ပါတယ်…။ အသိစိတ်တွေနဲ့ဝေးနေချိန်လေ…။ မနှစ်ကလောင်းခဲ့တဲ့အေးမြမြရေအေးလေးကို ဒီနှစ်ထိ မေ့မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ခံစားချက်လေးက ဘယ်လောက် လေးနက်လိုက်ပါသလဲနော်…။ တနှစ်မှ တခါ သစ္စာရှိစွာပွင့်တတ်တဲ့ ပိတောက်ပန်းလေးတွေကို ဆင်မြန်းထားတဲ့ သင်္ကြန်မေလေးရဲ့မေတ္တာတရားတွေ ထည့်လောင်းတဲ့ ဘေးဘယာတွေ ဝေးကွာသွားအောင် အစွမ်းထက်တဲ့ သင်္ကြန်ရေစင်အေးအေးလေးတဲ့…။ ဘယ်လောက်များ လှလိုက်သလဲနော်…။ ဒီမြေ ဒီရေမှာ အတူနေကြတဲ့ သင်္ကြန်မောင်နှမတွေရဲ့ မေတ္တာတရား… နှစ်သစ်အကူးမှာ ပူလောင်ခြင်းတွေကင်းပြီး ကျက်သရေအတိတ် ငြိမ်းချမ်းတဲ့အတိတ်ကို ဆောင်တဲ့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လှပလွန်းတဲ့ ဒီနှစ်ကူးပွဲလေးကို မြူမှောင်ဝေကင်း သီချင်းလေးက ဖော်ဆောင်သွားတာ…။ ငြိမ့်ညောင်းတဲ့ တီးလုံးလေးနဲ့ အတူ နားဆင်သူကို ညှို့ ယူလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းလိုက်တာ…။ အရောင်ဆိုးခံထားရတဲ့ သင်္ကြန်ကို ဒီသီချင်းလေးနဲ့အရောင်တွေ ချွတ် သန့် စင်ကြည့်စမ်းပါ…။ ကျွန်မတို့ ရဲ့ ရိုးရာ သင်္ကြန်ဆိုတာ ခပ်မှောင်မှောင် ညရောင်ထဲက လူလုံးမသဲကွဲ ကဲချင်တိုင်းကဲ ရဲချင်တိုင်းရဲနေကြတဲ့ ပွတ်သဘင် နိုက်ကလပ်တွေနဲ့နံ့ သာဆီ နဲ့ဟိုဟာလို အပုံကွာပါတယ် ဆိုတာ လက်တွေ့ ခံစားသိနိုင်မှာပါ…။
သင်္ကြန်မှာ အမျိုးကောင်းသားသမီးပီသစွာ စစ်မှန်သော ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ…။
Posted by တန်ခူး at 8:43 PM4comments:
ပုံကို အင်တာနက်မှ ရယူပါသည်၊
အသက် ၂၄နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အိမ်အကူကောင်မလေးကို အသက် ၈၅နှစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံသား အဖွားအိုကို သတ်တဲ့အမှုနဲ့တရားစွဲခံထားရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ ခုတလော ကျွန်မရဲ့စိတ်တွေကို အလုပ်များစေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တခုဖြစ်နေပါတယ်…။ လူတယောက်ရဲ့ အသက်… အထူးသဖြင့် အမယ်အို တယောက်ရဲ့ အသက်ကို သူမို့ရက်ရက်စက်စက် သတ်ရက်တယ်… ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးထက် အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို တွန်းပို့ ပေးဖို့ဘယ်လို အကြောင်းအရာတွေကများ နောက်ကြောင်းခံနေသလဲဆိုတာ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် စဉ်းစားကြည့်နေမိတယ်…။ အခြေခံအားဖြင့် ဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှ (အကြမ်းဖက်သမားတွေကလွဲလို )့ ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် သူများအသက်ကို သတ်ဖို့ကြံစည်တွေးတော စဉ်းစားပြီး… နောက်ဆုံးသတ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင် ရက်စက်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ တွန်းအားအပေးဆုံးအရာဟာ ဒေါသလို့အကြမ်းဖျင်းတွက်လို့ ရပေမယ့်… အဲဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ ဒေါသကို ရောက်စေတဲ့ စေ့စော်ပေးမှု…. အဲဒီအကြောင်းကို ကျွန်မဘာသာ ဆက်စပ်တွေးနေမိတာ…။
ခုတလော ကျွန်မကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ ဒီနိုင်ငံရုပ်သံက Code & Law ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လဲ ပါမယ်ထင်ပါတယ်…။ နဂိုကအပြစ်မရှိပဲ စိတ်ထားကောင်းကြတဲ့ သူတချို့အခြေအနေအကြောင်းအရာတခုခု သို့့အကြောင်းအရာတွေ အဖန်တလဲလဲဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့် နောက်ဆုံး မဖြစ်သင့်ပဲ ရာဇ၀တ်မှုတရားခံတွေ ဖြစ်သွားကြတာကို အဓိက ထားရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေပါ…။ ဖောက်ပြန်တဲ့ ယောင်္ကျားက မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး အငယ်အနှောင်းကို မယားကြီးရှေ့ တင် ပါတီကို ခေါ်လာတာကို မခံမရပ်နိုင်လို့ပါတီအပြီးမှာ ယောင်္ကျားနဲ့ စာရင်းရှင်းရင်း ဒေါသနောက်လိုက်သွားတဲ့ အသက်၆၀ကျော် အဖွားအိုက ယောင်္ကျားသတ်တဲ့ တရားခံဖြစ်… နိဂုံးမှာ သူက လူသတ်တရားခံဖြစ်ပေမယ့်… နိဒါန်းမှာ သူမှားခဲ့သလား…။ အရက်အမူးတိုက်ပြီး မဖွယ်မရာပုံတွေကို ရယူလို့အင်တာနက်ပေါ်မှာ တင်မယ်လို့ငွေညှစ်ခံရတဲ့ ကောင်မလေးက အဖန်အခါခါ ငွေညှစ်ခံရတဲ့အခါ အဆုံးမှာ ဒေါသမထိန်းနိုင် လက်လွန်သွားပြီး လူသတ်တရားခံဖြစ်သွားတဲ့ အဖြစ်…။ တအိမ်ထဲနေ ပထွေးရဲ့ အရွယ်မရောက်ခင် ကတည်းက မတရားကျင့်တာ ခံလာရတဲ့ ကောင်မလေးမှာ မမျှော်လင့်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါ မိခင်ရင်းဖြစ်သူ ကိုယ်တိုင်က သူ့ မြေးကို ကြွတ်ကြွတ်အိတ်နဲ့ ထုတ် အမှိုက်ပုံးထဲ လွင့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမှု… အဆုံးမှာ သူ့ သမီးက သူ့ အမေထောင်ကျမှာစိုးလို့သူ့ ရင်သွေးကို သူစွန့် ပစ်တဲ့အမှုနဲ့တရားခံသက်သက်အဖြစ်ခံခဲ့တာ… အဲဒီကောင်မလေးဘ၀ ကံဆိုးလိုက်ပုံများ ဘာအမှားတခုမှ မကျူးလွန်ပါပဲ ရာဇ၀တ်မှုတရားခံအဖြစ်ရောက်သွားခဲ့တာ… ။ အဲဒီအဖြစ်အပျက်တော်တော်များများဟာ အပြင်က တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို အခြေခံရိုက်တာမို့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါတိုင်း ကျွန်မမှာ အတွေးတွေနဲ့ကျန်ခဲ့တာ…။
အဲဒီဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ကျွန်မစိတ်ဝင်စားမိတဲ့ နောက်တချက်က ငယ်ငယ်ကတည်းက code & law နဲ့ လက်ပွန်းတတီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အချက်ကြောင့်လဲ ပါပါတယ်…။ ကျွန်မအဖေက ရှေ့ နေတယောက်ဖြစ်တာမို့အဖေရဲ့ အမှုတွေနဲ့ အတူ အဖေရဲ့ အမှုသည်တွေရဲ့ ဘ၀အမျိုးမိ်ျုး အဖုံဖုံက ကျွန်မအဖို့အတော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်…။ ကျွန်မအဖေရဲ့ ပထမဆုံးအမှုဟာ ဆင်းရဲသားဆိုက်ကားသမားလေး သူမသတ်ပဲ လူသတ်တရားခံအဖြစ် တရားစွဲခံရတဲ့အမှုပါ…။ အဲဒီအမှုမှာ အဖေက လူသတ်မှုကနေ အပြစ်မရှိတဲ့ တရားခံကို လွတ်မြောက်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တာ ခုထိ ကျွန်မသတိရနေပါသေးတယ်…။ ကိုယ့်အိမ်မှာ အိမ်ငှားတင်ပြီး အိမ်ငှားက သူအိမ်ရှင်ပါလို့ လိမ်လည်ပြီး ကိုယ့်အိမ်ပိုင်နဲ့အမှုတွေများရတဲ့ အရမ်းရိုးသားတဲ့ ဖေဖေ့အမှုသည်ကိုစံသိန်းကလဲ ကျွန်မတို့ အမြဲသတိရနေမိတဲ့ အမှုသည်ထဲမှာ ပါပါတယ်…။ တရားလိုက တရားခံဖြစ် တရားရုံးရောက်ရင် ကြောက်ပြီး ကိုယ်မှန်ပါလျက် တလွဲတွေလျှောက်ပြောတတ်လို့ရုံးချိန်းတခုပြီးတိုင်း အဖေနဲ့ ကိုစံသိန်းတို့ အသံကို ကြားရပါတယ်…။ ခင်များ.. ကိုယ်ပိုင်တဲ့အိမ်သူများ ထိုးပေးချင်လို့ လားလို့အဖေက မချင့်မရဲဆို ကိုစံသိန်းက ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ .. ကျွန်မတို့ မှာ ငိုအားထက်ရယ်အားသန်ရပါတယ်…။ အဆုံးမှာ သူ့ အ်ိမ်လေးသူပြန်ရသွားတော့ မျက်ရည်လေးစမ်းစမ်း စမ်းစမ်းနဲ့အဖေ့ကို လာကန်တော့တာ ခုထိမြင်ယောင်နေမိပါသေးတယ်…။
တရားခံမဖြစ်သင့်ပဲ တရားခံဖြစ်သွားရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ နှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတာကို တွေ့ ရပါတယ်…။ တမျိုးက ရိုးအလွန်းလို့သူများချထားတဲ့အကွက်ထဲမှာ ကိုယ်က ၀င်မိရဲ့သားဖြစ်တာနဲ့ … နောက်တမျိုးက အခါခါခံလာရတဲ့အခါ ခံနိုင်ရည်အတိုင်းအတာကို ကျော်လွန်ပြိး ဒေါသကို မထိန်းနိုင်တဲ့သူက နောက်ဆုံး အကြီးမားဆုံးအမှား သံသရာထိပါ ပါမယ့်အမှားကို ကျူးလွန်တဲ့ အဆင့်ရောက်သွားတာပါ…။ ပထမအမျိုးအစားကတော့ နဂိုနေရိုးအတဲ့ လူတွေမှာ ခံရလေ့ရှိပါတယ်…။ ကျွန်မ အဓိကထားပြောချင်တာက ဒေါသမထိန်းနိုင်တဲ့အမျိုးအစားပါ…။ လူတချို့ ဟာ များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ခံနိုင်ရည်အင်အား ဘယ်အဆင့်ထိရှိတယ်ဆိုတာ မသိကြပါဘူး…။ နဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ဖြစ်တော့မှ သိကြတာများပါတယ်…။ တဦးနဲ့ တဦးဆက်ဆံရေးမှာ တကယ်လို့ များ အဆင်မပြေမှုတွေ များသထက်များလာရင် သတိထားဆက်ဆံသင့်ပါတယ်…။ ပေါက်ကွဲကြမယ့်တနေ့ ကို ရောက်အောင် စောင့်ကြည့်တာထက် ဆက်ဆံရေးဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲ ညှိနှိုင်းလို့ ရလားဆိုတာ စဉ်းစားစမ်းသပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်…။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဥပေက္ခာတရားကို လက်ကိုင်ထားနိုင်တယ် ခန္ဒီပါရမီနဲ့ ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ တမျိုးပေ့ါလေ…။ ဆက်ဆံရေးဆိုရာမှာ မိဘနဲ့ သားသမီး… သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေး… ညီအကိုမောင်နှမဆက်ဆံရေး… လင်မယားဆက်ဆံရေး… အလုပ်ရှင်နဲ့ အလုပ်သမားဆက်ဆံရေး.. ဆရာတပည့်ဆက်ဆံရေး… အားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်…။ ညှိုနှိုင်းယူလို့ မရနိုင်တော့ဘူးလို့ယူဆရင်တော့ ဒီအတိုင်း ခံနိုင်ရည်အားလွန်လာမယ့် နေ့ ကို စောင့်နေတာထက် ဆက်ဆံရေးရပ်တန့် ပစ်လိုက်တာ အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်မထင်မိပါတယ်…။
ပထမအပိုဒ် ကျွန်မအဓိကထားပြောချင်တဲ့ အပိုဒ်ကို ပြန်ကောက်ရရင် မြန်မာအိမ်အကူမလေးမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံလို့ဒီအလုပ်ကို လုပ်ရတာပါ… ဒီအပြင့် သူဆက်ဆံရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်လောက်ဆိုးဝါးသလဲ ကျွန်မတို့ခန့် မှန်းရခက်ပါတယ်…။ MRT ပေါ်မှာ မတော်တဆ ထိမိရင်တောင် ဆောရီးလို့ ပြောတာကို ဂရုမစိုက်ပဲ မီးပွင့်အောင် ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေပေါတဲ့ ဒီလိုနိုင်ငံ… ကြင်နာတတ်ဖို့ ကူညီတတ်ဖို့အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့တွန်းအားပေးယူရတာတောင် အနိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ ဒီလိုနိုင်ငံမျိုးဆိုတော့ ပိုလို့ တောင် ခန့် မှန်းရခက်ပါတယ်…။ သူ့ ခမျာ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေကို မလွှဲသာမရှောင်သာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှာပါ…။ အဲဒီလို မလွှဲမရှောင်သာ ရင်ဆိုင်ရင်း မြိုသိပ်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ခံနိုင်ရည်အဆင့်ကို အတော်လေးကို ကျော်လွန်သွားပြီး အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့နိဂုံးချူပ်ရတဲ့ အဖြစ်ဟာ အတော်ကို ရင်နာစရာကောင်းလှပါတယ်…။ တကယ်လို့ များ အိမ်ရှင်က တရားလက်လွတ်ဖြစ်လို့ဒီအဖြစ်မျိုးနဲ့အဆုံးသတ်ရတာဆိုရင်တော့ အဲဒီအဆုံးသတ်နည်းလမ်းထက် ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ ကျွန်မ ပြောပြပါရစေ…။ တရားလက်လွတ့် နှိပ်စက်တတ်တဲ့ အိမ်ရှင်နဲ့ လုပ်ရရှာတဲ့ အိမ်အကူညီမငယ်များ ဒီလိုအမှားမျိုး ထပ်မဖြစ်အောင် စေတနာနဲ့ဒီပို့ စ်ကို ရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။ ကိုယ့်အဖြစ်တွေကို မြိုသိပ်မထားပါနဲ့ …။ နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတယောက်ယောက်ကို အမြဲရင်ဖွင့် တိုင်ပင်ပါ…။ အိမ်ရှင်နဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အတိုင်းအတာတခုအထိ ဆိုးဝါးလာပြီဆို ရဲစခန်း သို့counselling firm တခုခုနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ..။ အဖြစ်အပျက်အသေးစိတ်ကို ပြောပြပြီး သူတို့ ဆီက အကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ…။ ကိုယ့် agency ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြပါ…။ အဆိုးဝါးဆုံး အခြေအနေထိ မရောက်မှီ အလုပ်ကို ရပ်တန့် ဖို့နည်းလမ်းရှာပါ…။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာလဲ မြန်မာ community အဖွဲ့ အစည်းတွေ ရှိတာမို့အဲဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကြုံကြရရင် အားလုံးဝိုင်းတာဝန်ယူ ကူညီပေးကြမှာ သေချာပါတယ်…။ လောကကြီးမှာ ကိုယ်တယောက်ထဲလို့ မအောင့်မေ့ပါနဲ့ …။ ငါ့ဒုက္ခ ငါလည်စင်းခံမယ်ဆိုပေမယ့်လဲ ဘယ်လောက်ထိ ခံနိုင်ရည်ရှိမလဲနော်…။ ဒါကြောင့် အဲဒီလို အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့မကြုံအောင် ထွက်ပေါက်အမှန်ဖြစ်ရအောင် အဲဒီအခြေအနေထိ မစောင့်ပဲ နီးစပ်ရာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို တိုင်ပင်အကူအညီတောင်းခံဖို့ဒီပို့ စ်လေးနဲ့ တိုက်တွန်းပါရစေ….။
(စာကြွင်း… ကျွန်မဒီပို့ စ်ကို ဖတ်မိသူထဲမှာ any communication နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြတ်ရိုက် ထွက်ပေါက်မရှိဘူးလို့ခံစားရနေသူများရှိရင် cmyayt@gmail.com ကို ဆက်သွယ်ပါလို့ .. အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပေးဖို့ ပါ)
Posted by တန်ခူး at 10:26 PM3comments:
Posted by တန်ခူး at 5:00 PM3comments:
နည်းပညာ နှင့် ဆိတ်ကွယ်ရာ
ဒီနေ့ မနက် ရေဒီယိုနားထောင်တော့ ဒဏ်ငွေတွေ အများကြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အထဲကကို ထင်သလို အမှိုက်ပစ်တာကို ဘယ်လိုများ ကာကွယ်နိုင်မလဲဆိုတာ ဆွေးနွေးကြတာ နားထောင်ရပါတယ်…။ အဲဒီထဲမှာ တယောက်က တကယ်လို့ သင်နဲ့ ခင်နေတဲ့ သင့်အိမ်နီးချင်းက အမှိုက်ပစ်နေတာတွေ့ ရင် သင်သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းမေးလာပါတယ်…။ သက်ဆိုင်ရာကို တိုင်တာ ဘယ်သူတိုင်လဲဆိုတာ သိသွားရင် အိမ်နီးချင်း အချင်းချင်း မိတ်ပျက်စေတာမို့သူအမှိုက်ပစ်တာကို ကင်မရာလေးနဲ့မသိအောင် မှတ်တမ်းတင်ပြီးမှ အမည်မဖော်လိုသူအနေနဲ့တိုင်မယ်ဆိုတာလေးကို တယောက်က ပြောသွားပါတယ်…။ ခုခေတ်နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ခလုတ်ကလေး တချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းမှုတွေက ကမ္ဘာကြီးဆီကို ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာ လူတွေ သတိထားဖို့ လိုပါတယ်…။ အမှိုက်ပစ်တယ်ဆိုတာ မကောင်းမှုကျူးလွန်တဲ့အထဲမှာ အနိမ့်ဆုံး အဆင့်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် ဒီလိုမကောင်းမှုလေးတောင် လူတွေက နည်းပညာသုံးပြီး ကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခေတ်မို့နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဆိတ်ကွယ်ရာဆိုတာ မရှိသလောက် ပါးလျလာတာကို တွေးမိသွားပါတယ်…။
ဟိုတနေ့ က သားကျောင်းကို ကိစ္စတခုရှိလို့ သွားတော့ ကျောင်းရုံးခန်းထဲမှာ ထိုင်နေတုန်း ကျောင်းအမှုထမ်း တယောက်က ကလေးတွေကို ဆက်ဆံနေတာ အရမ်းရိုင်းပြတာကို တွေ့ ခဲ့ရပါတယ်…။ မူလတန်းကျောင်းက ၀န်ထမ်းတယောက်အနေနဲ့ငယ်ရွယ်နုနယ်တဲ့ မူလတန်းကလေးတွေကို အဲလို ကြမ်းတမ်းရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံတာ လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး…။ လက်ထဲက လက်ကိုင်ဖုန်းကို ခလုတ်နှိပ်ပြီး record လုပ်မယ်အလုပ်မှာ သားဆရာမရောက်လာတာကြောင့် မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး…။ မိဘတွေ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ ကလေးတွေကို ရိုင်းပြစွာ ဆက်ဆံတဲ့ ၀န်ထမ်းကို နောက်များကြုံရင် ကျွန်မနည်းပညာနဲ့ပညာပေးဖို့ဝန်လေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဆိုခဲစေ မြဲစေတဲ့…။ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်း လေထဲမှာ မပျောက်သွားတဲ့ ခေတ်ပါ…။ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ထက် နိမ့်ကျတဲ့သူကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လက်လွတ်စပယ် ကိုယ်ချင်းစာတရားမဲ့စွာ ပြောဆိုပစ်လိုက်တာမျိုးက ဟိုးအရင် နည်းပညာတွေ မတိုးတက်တုန်းက ရပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ မရတော့ပါဘူး…။ ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတခွန်းက ကိုယ့်မှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ အတော်လေး သတိထားရမယ့်ခေတ်ပါ…။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ နှလုံးသားရှိတာမို့သူတို့ နာကျင်တာနဲ့ အမျှ နာကျင်မှုကို လူတိုင်းသိအောင် နည်းပညာလက်နက်နဲ့ထုတ်ပြလို့ ရနေပါပြီ…။ နည်းပညာကြောင့် တဖက်စောင်းနင်းဆိုတာမျိုးတွေ ရှားပါးလာမှာ အမှန်ပါပဲ…။
အိမ်မှာ အိမ်အကူနဲ့ ထားခဲ့ရတဲ့ ကလေးလေးကို အိမ်အကူက မိဘတွေ ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ နှိပ်စက်တာကို ဖွက်ထားတဲ့ ကင်မရာလေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကျွန်မကြည့်ရတော့ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်…။ မူကြိုကလေးကို ပက်ပက်စက်စက် နှိပ်စက်တဲ့ဆရာမရဲ့လုပ်ရပ် ဗွီဒီယိုဖိုင်ကလဲ မိခင်ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မနှလုံးသားတွေကို ဆုတ်ခြေနေသလို နာကျင်လွန်းလှပါတယ်…။ လူအိုရုံက မသန်မစွမ်းတော့တဲ့ အမယ်အိုကြီးကို သူနာပြုမက ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း လုပ်ကိုင်ပြီး ကုတင်ပေါ် ၀ုန်းကနဲ ပစ်ချတဲ့အခါ အမယ်အိုရဲ့ညည်းသံကို ကြားရတော့ ကျွန်မမိဘချင်း ကိုယ်ချင်းစာနာပြီး ရင်ထဲမှာ စူးရှနာကျင်မိပါတယ်…။ အလုပ်သွားနေတယ်လို့အိမ်ကထွက်သွားတာကို ယုံကြည်နေတဲ့ ရိုးသားလွန်းတဲ့ မိန်းမက သူ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကင်မရာထဲမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ သူ့ ယောင်္ကျားနဲ့ နောက်သူ့ သူငယ်ချင်းတယောက် တိတ်တိတ်ပုန်းဖောက်ပြန်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ တွေ့ လိုက်ရတဲ့ အခါ ယုံကြည်မှုတွေ အငွေ့ ပျံယူကျုံးမရဖြစ်တာတွေ့ ပြီး ကျွန်မ နှုတ်ခမ်းတွေ ပြတ်လုပ်မတတ် ဖိကိုက်နာကျင်ခဲ့ဖူးပါတယ်…။ ကလေးလေးကို ကားနဲ့ မတော်တဆ တိုက်မိရာက မသေမရှင်ဆို သက်သေဖြစ် လျော်နေရမှာ ကြောက်လို့မသေမချင်း အသေတိုက်သတ်တဲ့မြင်ကွင်းကို အတွေ့ …. လူမဆန်တဲ့ အဲဒီလုပ်ရပ်ကို လုပ်ခဲ့သူတွေ ဘယ်လို လုပ်ခဲ့ကြသလဲတော့ မသိ… ကျွန်မတော့ မကြည့်ရဲလို့မျက်လုံးတွေ ပိတ်ပစ်ရတဲ့ အထိပါပဲ…။ အဲဒါတွေ တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ… အဲဒီမကောင်းမှုတွေကို သူတို့ က ဆိတ်ကွယ်ရာ ထင်ပြီး အသေအချာကြီးကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာ…။ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာကြောင့် သူတို့ ဆိတ်ကွယ်ရာကနေ တကမ္ဘာလုံး မြင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးကို လျင်လျင်မြန်မြန်ကို ရောက်လာတာ…။ကိုယ်ပြုသောကံ ကိုယ့်ထံပြန်လာတာ နောင်ဘ၀တောင် မစောင့်ဘူး… ဒီဘ၀တင်ပါ…။
ကိုယ်ချင်းစာတရားတွေ ပါးရှားလာတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ လူတွေက ကိုယ့်အတ္တအတွက် သူများကို ချနင်းဖို့ဝန်မလေးကြတော့ဘူး…။ မတရားတာကို မတရားမှန်းသိလျက်နဲ့မြိန်ရေလျက်ရေ ကျုးလွန်လာကြတယ်…။ ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က အရက်ကို ပုန်းလျိုး ကွက်လျိူး သောက်ကြလို့အရက်ပုန်းဆိုင်လို့ တောင် နာမည်တွင်တာ ကြားဘူးတယ်…။ ခုခေတ်မှာ အရက်ပုန်းဆိုင်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့မေးရအောင် ရပ်ကွက်တိုင်း လမ်းတိုင်းမှာ အရက်ဆိုင်တွေ လက်ညှိးထိုးမလွဲ…။ စပွန်ဆာဆိုတာ ခေတ်စားလာတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်ကြီးမှာ ငွေအတွက် သာယာမှုအတွက် ကိုယ့်တန်ဖိုးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ခြေထောက်နဲ့ နင်းခြေပစ်လိုက်ကြတဲ့ မိန်းခလေးတွေကလဲ များများလာတယ်…။ အရက်ဆိုင်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာလို့ ထင်ကြတယ်… နိုက်ကလပ်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာလို့ထင်ကြတယ်… အင်တာနက်ကို ဆိတ်ကွယ်ရာလို့ထင်ကြတယ်…။ အဲဒီ ဖောက်ပြန်မှုတွေ ပျော်ပျော်ကြီး ကျင်းပရာ ဆိတ်ကွယ်ရာတွေဟာ နည်းပညာရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် သူတို့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာတွေကို လှလှကြီးသတ်ပြနိုင်တဲ့ သတ်ကွင်းတွေပါ…။
တကယ်တော့ မကောင်းမှုဆိုတာ ဆိပ်ကွယ်ရာမှာတောင် မကျူးလွန်သင့်ဘူး ဆိုတာ အရွယ်ရောက်တဲ့ သူတိုင်း နားလည်ပြီးသား အခြေခံကျင့်ဝတ်ပါ…။ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုနဲ့ ယဉ်ပါးလာကြတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ အဲဒီအခြေခံလူ့ ကျင့်ဝတ်ကို တမင်မေ့ထားတဲ့ သူတွေအတွက် နည်းပညာဆိုတဲ့ ပညာပေးလက်နက်တခု ပေါ်လာတာ ကျွန်မဖြင့် ၀မ်းသာလို့မဆုံးပါဘူး…။
လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာတရား မေတ္တာတရား လက်ကိုင်ထားနိုင်ကြပါစေ…။
Posted by တန်ခူး at 1:10 PM4comments: